काठमाडौं । ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीलाई पितृशोक परेको छ । उनका पिता तुलसीरमण काफ्लेको हिजो शनिबार (मंसिर २० गते) ८१ वर्षको उमेरमा स्वर्गारोहण भएको हो ।
गत वर्ष पुसदेखि मस्तिष्कघातले थलिएका पिता काफ्लेको लामो समय बाँसबारीस्थित उपेन्द्र देवकोटा र माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पिटलमा उपचार गरिएको थियो । पुर्ख्यौली घर स्याङ्जा रहेका काफ्ले करिब दुई दशकदेखि मधुवन नगरपालिका ४ बर्दियामा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौंमा उपचार गरेर स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएपछि उनलाई करिब डेढ महिना अघि बर्दिया लगिएको थियोे । स्याङ्जामा लामो समय समाजसेवा र शिक्षण पेशामा संलग्न स्व. काफ्ले राजनीतिमा पनि उतिकै सक्रिय रहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दियो ।
२०१८/१९ सालदेखि अध्यापन सुरु गरेका उनी २०६२ सालमा बर्दियाकै श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट अनिवार्य अवकाश भएका थिए । पारिवारिक स्रोतका अनुसार काफ्ले अवकाशपछि पनि करिब दुई दशक सोही विद्यालयको गुणस्तरीय विकास र उन्नतिमा खटिएका थिए ।
उनले तत्कालीन पंचायती शासनकालमा स्याङ्जामा आधा दर्जन विद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक जागरण चलाएका थिए । शिक्षामार्फत व्यवस्था परिवर्तनमा होमिएको र तत्कालीन सरकारविरुद्ध अपराधिक काम गरेको ठहर गरी २०३१ सालतिर राजकाज मुद्दामा जेल सजाय दिइएको थियो ।
स्व. काफ्लेले तत्कालीन समयमा लगातार १८ महिना र पटक पटक गरी ४ वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताएका थिए । नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा समेत संलग्न उनको राजनीतिक योगदानबारे स्याङ्जामा निरन्तर चर्चा हुने गर्छ ।
वर्तमान समयका चर्चित काँंग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, गोपालमान श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्री लगायत उनका राजनीतिक सहकर्मी हुन् । भारतको बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा आचार्य (स्नातकोत्तर) सम्मको अध्ययन गरेका काफ्ले तत्कालीन भारतमा अंग्रेजविरुद्ध महात्मा गान्धीले चलाएको `भारत छोडो´ आन्दोलनबाट प्रभावित भएर शिक्षामार्फत राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते विपि कोइरालाको निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्त गरेपछि काफ्ले काँग्रेस राजनीतिमा तानिएका थिए । स्याङ्जाका तत्कालीन शिक्षा तथा समाज सुधारकहरू डण्डपानी वाग्ले, शिवकुमार शर्मा, विश्वप्रेम अधिकारी, जंगबहादुर गुरुङसँगै शिक्षा तथा समाज सुधारको जागरणमा होमिएका थिए । वियाेगी सहित स्वर्गीय काफ्लेका ५ छाेरा र ४ छाेरी छन् ।
चुनिखेल फिडरको सेवा ९ घन्टाका लागि अवरुद्ध, फेवा फिडरको पनि लाइन काटियो
जलविद्युतमा ‘भण्डारीको ३ दशकको अनुभव’ काँग्रेसले उपयोग गर्दै
मेरो राजनैतिक चरित्र हत्याको प्रयास गरियोःपुन